2021 Tanànan'ny Etazonia tsara indrindra ho an'ny hetsika any ivelany amin'ny lohataona
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » 2021 Tanànan'ny Etazonia tsara indrindra ho an'ny hetsika any ivelany amin'ny lohataona
Miaraka amin'ny lohataona tsy mitovy amin'ny an'ny hafa, fialantsasatra lohataona hafa dia mety milamina
Ny fivoahana any ivelany, ny safidy tsara indrindra amin'ny vaxication, andro fahasalamana virtoaly, na fitsangatsanganana amin'ny ankapobeny
Tsy ny tananan'i Etazonia rehetra dia mitovy fananganana mandritra ny fotoana natiora
Ny manam-pahaizana dia nametraka ireo tanàna 200 lehibe indrindra any Etazonia miorina amin'ny 17 fototra
Amin'ny lohataona tsy mitovy amin'ny an'ny hafa, fialantsasatra lohataona hafa dia mety milamina - ary tsia, tsy midika hoe milatsaka an-tsitrapo izany.
Midika izany hoe mivoaka any ivelany, ny safidy tsara indrindra amin'ny vaxication, andro fahasalamana virtoaly, na fitsangatsanganana amin'ny ankapobeny.
Saingy tsy ny tananan'i Etazonia dia naorina mitovy amin'ny fotoana tsara eo amin'ny natiora.
Izany no nahatonga ny manam-pahaizana momba ny dia hamorona ny tanàna tsara indrindra ho an'ny hetsika ivelan'ny lohataona.
Mba hanampiana ny Amerikanina handamina traikefa nahafinaritra nefa azo antoka any ivelany, dia nalahatra ireo manam-pahaizana 200 tanàna lehibe indrindra any Etazonia miorina amin'ny lafin-javatra 17 lehibe. Anisan'izany, ohatra, ny isan'ireo zaridaina, làlambe ary tobim-bahoaka; fivezivezena; sy ny habetsaky ny tara-masoandro.
Zahao ireo toerana lohataona lohataona ambony (sy ireo izay hitazonana ny lisitra fohy) etsy ambany, arahin'ireo fanasongadinana sy jiro fanolorana ambany.
Tanàna ivelany tsara indrindra amin'ny lohataona
Tanàna an-kalamanjana ratsy indrindra amin'ny lohataona
Hevitra misongadina sy ambany:
West no tsara indrindra: Raha toa ny tanàna 50 tsara indrindra ho an'ny hetsika any ivelany amin'ny lohataona dia manerana ny sari-tany, ny sivy amin'ireo 10 voalohany dia avy amin'ny fanjakana Andrefana sy Pasifika. Ohatra, i Honolulu dia mitana sokajy avo sokajy misy toetrandro, ary Portland dia nahazo isa marobe tamin'ny sokajy marobe, anisan'izany ny naotin'ny bisikileta sy ny lalana maro.
Ny tanànantsika ambony indrindra amin'ny hetsika any ivelany amin'ny lohataona dia San Francisco, miaraka amin'ny isa an-tongotra mahaliana sy isan'ny manintona, ankoatry ny toetra hafa. Miaraka amin'ny làlambe, hetsika, ary hazavan'ny masoandro, ny morontsiraka Andrefana no faritra tsara indrindra hankafizana ny tsara indrindra atolotray amin'ity vanim-potoana ity.
Ny renivohitry ny firenena - ny mandeha an-tongotra: Na dia any andrefana aza ny ankamaroan'ny tanànantsika ambony dia nisy tanàna iray niavaka nanatrika ny atsinanana: Washington, DC Washington no tanàna azo aleha indrindra any Amerika ary tsy nahomby tamin'ny isa bisikileta, ny isan'ny manintona ary ny zaridainam-panjakana.
Ary aza adino ireo voninkazo serizy izay manintona ny olona rehetra amin'ny fotoan'ny lohataona ka hatrany Washington, DC Na dia voatazona noho ny tahan'ny heloka bevava sy ny volan'ny masoandro amin'ny lohataona aza ny Distrika, dia mbola toerana iray ho an'ny lohataona ivelany amin'ny ankapobeny. Morontsiraka atsinanana.
Mitsimoka avy any atsimo: Ny tanànan'ny atsimo dia nilatsaka teo amin'ny farany ambany ny laharanay, matetika very ny isa amin'ny metrika amin'ny sokajy toetr'andro sy ny hatsaram-panahin'ny mpitsidika.
Jackson, Mississippi, ohatra, dia eo akaikin'ny farany ambany noho ny isa an-tongotra sy ny fahafatesan'ny mpandeha an-tongotra. Metairie, Louisiana, no lohataona faharoa misy ny orana eto amin'ny firenena. Ary i Little Rock, Arkansas, dia iray amin'ireo isa bisikileta ratsy indrindra amin'ny tanànan'ny Etazonia.